Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba zikaRhulumente » Indima ye-United States kwi-UNWTO Entsha?
IBhodi yezoKhenketho yaseAfrika • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • lomhleli • Iindaba zikaRhulumente • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • ISpain Iindaba Eziphambili • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba zase-USA ezaphulayo • I-WTN
UMarcelo Risi, UNWTO
Kunzima kubaphathiswa bezokhenketho ukuba baye eMadrid ekupheleni kwale nyanga ukwenza imbali ye-UNWTO entsha. Kungaba ngokulinganayo ithuba elilahlekileyo lokuba amazwe angamalungu e-UNWTO abonise ubunkokeli kwaye abe nguvulindlela kwikamva kunye ne-UNWTO entsha, ukuba bahlala ekhaya okanye bathumele i-ambassador ukuba benze umsebenzi womphathiswa wezokhenketho kwi-UNWTO General Assembly eMadrid ngoNovemba. 28-Disemba 3.
I-United States, i-Australia, kunye ne-United Kingdom ngamagunya amakhulu kuKhenketho lweHlabathi, kodwa ingelolungu loMbutho weHlabathi wezoKhenketho (UNWTO).
Abameli, abacebisi ababiza imali eninzi, kunye nezinye iingcali ezivela kula mazwe ziye zaqeshwa yi-UNWTO kunye namahlakani okubonisana, uphando, kunye neminye imisebenzi, ngelixa amazwe abo engahlawuli nayiphi na imali yobulungu.
Ngaba isakhiwo esitsha se-UNWTO siya kubuyisela i-US kunye namanye amagunya ehlabathi kukhenketho kule arhente ye-UN edibeneyo njengamalungu ahlawulayo?
I-US yayililungu eliseka i-UNWTO. Kuba iUnited States isenempembelelo enkulu kwi Umbutho wezoKhenketho kwiHlabathi liphela kunye noKhenketho lweHlabathi ngokubanzi, kodwa ukungahlawuli umrhumo wobulungu kubangele ukuba i-UNWTO ingabinantsingiselo, ingazinzi ngokwezimali, kwaye ingabi yinkokeli ehlonitshwayo kwicandelo likarhulumente lehlabathi lokhenketho lwehlabathi.
NgoSuku lweHlabathi loKhenketho lwe-2016, i-fouMphathiswa wezoKhenketho waseZimbabwe, uGqr Walter Mzembi, uxelele eTurboNews: “NgoSuku lweHlabathi lwezoKhenketho ngo-2016, ndizele ziingcamango.”
UMzembi wayefuna ukuba ilizwe laseMelika kunye nommandla wonke uzibandakanye ne-UNWTO ngokuzimeleyo. Ukuthathela ingqalelo ilizwe ngalinye sele lizimele kakhulu kukhenketho lokuthengisa ngaphakathi nangaphandle kwe-US, le ngcamango yayingekho ngqiqweni.
“Mhlawumbi esi sisisombululo selona gunya likhulu kwezokhenketho lehlabathi, iUnited States, ukuba lizibandakanye ngokusemthethweni noMbutho weZizwe eziManyeneyo woKhenketho lweHlabathi (UNWTO). Isisombululo sinokuba ngamalungu amatsha angama-50 e-UNWTO, ilizwe libe linye ngexesha,” utshilo uMzembi eTurboNews.
Le ndlela yokuphuma ngaphandle kwebhokisi yaxutyushwa kunye no-Ambassador wase-US uHarry K. Thomas, Jr., kunye noDkt Walter Mzembi, umgqatswa ocacileyo kuNobhala Jikelele we-UNWTO kwi-2017 xa wayekhankasela uNobhala-Jikelele wangoku uZurab Pololikashvili. .
I-UNWTO igcina ukwabelana ngedatha, uphando, kunye neminye imiba kunye ne-US kunye nezizwe ezininzi ezingengomalungu ngaphandle kokufumana umrhumo. Oku ngokuqinisekileyo akuzinzile.
NgoJuni ka-2019, amahemuhemu aqala malunga ne-United States ukujoyina uMbutho wezoKhenketho weHlabathi. Oku kwanqatshwa ngokukhawuleza ngu-Isabell Hill, uMlawuli, I-Ofisi yoKhenketho yeSizwe ekwi- Isebe lezoRhwebo laseMelika, kodwa emva kwemiboniso, imisebenzi ibonakala ihambela phambili kulo mba.
Oku bekungo-Okthobha ka-2019, kwiinyanga ezi-6 phambi kokuba i-COVID-19 itshabalalise ukhenketho. Esi yaba sisiphelo solawulo lukaTrump eUnited States.
IsiVumelwano seMozulu saseParis, isivumelwano senyukliya sase-Iran, iNtsebenziswano ye-Trans-Pacific, i-UNESCO - ezi zizonke izivumelwano zamazwe ngamazwe okanye i-protocols i-United States iye yazikhupha ukususela ekubeni uMongameli uTrump wenza i-ajenda yakhe "yeMelika yokuqala" ekuqaleni kwexesha lakhe lokuqala.
Ngo-2019, uNobhala oNcedisayo welizwe uKevin E. Moley wayenentlanganiso kunye namagosa avela kwi-UNWTO eMadrid ukuze aqhubele phambili iingxoxo zokubuyela e-US.
NgoJuni 2019, a Abathunywa be-White House bazimase intlanganiso yeBhunga lesiGqeba sombutho eBaku, Azerbayijani. Kwangaxeshanye, injongo ye-US yokubonisana kwakhona ngobulungu yabhengezwa. "IMelika kuQala ayithethi ukuba yiMelika kuphela," utshilo uSekela Ntloko yezaBasebenzi kwiNdlu eNgcwele.
NgoJuni ka-2019, xa ithemba lokujoyina "kwimigaqo eluncedo e-United States" labhengezwa okokuqala, iSebe lezase-US lakhupha isitatimende esithi "uLawulo lukholelwa ukuba i-UNWTO ibonelela ngamandla okukhula kwamafutha kweli candelo, dala. imisebenzi emitsha yabantu baseMelika, kwaye iqaqambise uluhlu olungenakuthelekiswa nanto kunye nomgangatho weendawo zokundwendwela zase-US. "
I-UN ngelo xesha yayivuyiswa lithemba lokubuyela kwe-US. Kwisiteyitimenti esikhutshwe ngo-2019, uNobhala-Jikelele we-UNWTO uZurab Pololikashvili uthe, "Kuyakhuthaza kakhulu ukuba i-United States ibonise ngokucacileyo injongo yayo yokubuyela kwi-UNWTO kunye nokuxhasa ukhenketho njengomqhubi ophambili wokudala imisebenzi, utyalo-mali kunye noshishino, kunye nokukhusela indalo. kunye nelifa lenkcubeko ehlabathini lonke.”
Ezinye iindawo zamandla zokhenketho ezingengawo amalungu e-UNWTO aquka i-UK, iCanada, ne-Australia. Ngelixa ezo zizwe zihambile ngenxa yezizathu ezahlukeneyo, ukunqongophala koqwalaselo kunye neziqinisekiso zamalungelo oluntu zabo bahleli kwibhunga labo labacebisi bezisoloko zigxekwa rhoqo kulo mbutho.
The Umbutho wezoKhenketho kwiHlabathi liphela idinga la magunya amakhulu okhenketho ukuba abe ngamalungu. Oku akuphelelanga nje kwimali yobulungu efuneka ngokungxamisekileyo, kodwa nokugcina nakuphi na ukuma njengombutho wehlabathi jikelele kwicandelo likarhulumente lokhenketho lwehlabathi.
Ngokutenxa okuninzi phakathi kobunkokeli obukhoyo kwi-UNWTO, kunye ne-COVID-19 ityhala ukhenketho kwimingeni yayo emikhulu kunanini na ngaphambili, ithemba lokujoyina i-United States liya likude kakhulu - okanye akunjalo?
U-Isabel Hills, ongeyena kuphela uMlawuli we-Ofisi yeSizwe yokuHamba kunye noKhenketho, iSebe lezoRhwebo, eUnited States, kodwa kunye noSihlalo we IKomiti yezoKhenketho yoMbutho weNtsebenziswano yoQoqosho noPhuhliso (OECD)., unokufikelela ngokupheleleyo kuwo onke amaxwebhu e-UNWTO kunye nophando, nangona i-United States ingelolungu, ayizange ihlawule imali yobulungu efunekayo ngokukhawuleza kwi-UNWTO kwiminyaka yokugqibela ye-10.
I-OECD yiforamu apho oorhulumente bathelekisa kwaye batshintshiselane ngamava omgaqo-nkqubo, bachonge izenzo ezilungileyo ngokubhekiselele kwimingeni esakhulayo, kunye nokukhuthaza izigqibo kunye neengcebiso zokuvelisa imigaqo-nkqubo engcono yokuphila ubomi obungcono.
Injongo ye-OECD kukukhuthaza imigaqo-nkqubo ephucula uqoqosho nentlalontle yabantu kwihlabathi jikelele.
Ngokufunda ukhenketho indlela yokusebenza kunye ne-COVID, iSaudi Arabia kunye neSpain zaqala intshukumo entsha kwaye sele izise i-US kulo mxube. Phantsi kobunkokeli baseSaudi, iManyano yoKhenketho eqala kumazwe amaninzi, enabachaphazelekayo abaninzi kwi-COP26 eGlasgow ekuqaleni kwale nyanga yasekwa.
Mhlawumbi kukho ithuba lokuba eli nyathelo litsha lidityaniswe kwi-UNWTO entsha? Ukuba eli nyathelo beliza kudityaniswa kwi-UNWTO entsha phantsi kobunkokeli obutsha, kukho ithuba lokwenene lokuba onke amagunya okhenketho ehlabathi azibandakanye nalo mbutho wezokhenketho kwakhona.
Isalathiso esinjalo sokubandakanywa kwabantu besisele senziwe ngokuphindaphindiweyo ngamazwe aseka eli nyathelo litsha.
KwiSigaba soku-1, amazwe ali-10 ewonke aye amenywa kumfelandawonye:
Olu phuhliso lutsha luphinda luqinisekise ukubaluleka kweNdibano Jikelele ye-UNWTO ezayo ukubeka umbutho kwindlela entsha.
Ithuba labaphathiswa bezokhenketho bamazwe angamalungu e-UNWTO ukuba baye eMadrid ekupheleni kwale nyanga kwaye bathathe inxaxheba kwiNdibano Jikelele yenziwa nzima ngakumbi ngemini.
INdibano yeZizwe eziManyeneyo inokuba yintlanganiso yoonozakuzaku baseMadrid ukuze kuxhamle amazwe angamalungu ambalwa. Oku akunakuzisa inani elifunekayo leevoti eziyimfuneko kwaye kunokunyanzela enye iseshoni kwixesha elizayo.
Nangona kunjalo, kubalulekile ukuba amazwe angamalungu e-UNWTO kunye nabaphathiswa bawo baqonde ukubaluleka komsitho.
USihlalo we-ATB uCuthbert Ncube kunye noHloniphekileyo. Unobhala wezoKhenketho eKenya uNajib Balala
Cuthbert Ncube, Usihlalo we IBhodi yezoKhenketho yaseAfrika, xelelwe eTurboNews namhlanje kutyelelo olusemthethweni lwaseSenegal, "Ibhodi yezoKhenketho yaseAfrika icebisa ukuba iAfrika imanyane kwaye idibane eMadrid kwiNdibano Jikelele ye-UNWTO."
Nantsi into enokwenzeka ukuba uNobhala Jikelele wangoku akaqinisekiswanga kwiNdibano Jikelele ye-UNWTO ezayo eMadrid nge-3 kaDisemba 2021:
INdibano yeZizwe eziManyeneyo ayisayi kwamkela isindululo esenziwe liBhunga lesiGqeba esiLawulayo kwisikhundla sikaNobhala Jikelele woMbutho.
Kuya kuyalela iBhunga eliLawulayo ukuba libe kwiseshoni yalo ye-115 eya kubanjelwa eMadrid, eSpain, ngoDisemba 3, 2021, ukuvula inkqubo entsha yokunyulwa koNobhala Jikelele wentlangano.
Ingayalela iBhunga leSigqeba ukuba inkqubo enjalo yonyulo inobuncinane bethayimthebhile yeenyanga ezi-3 kunye nobuninzi beenyanga ezi-6, ukususela kumhla wokuvulwa kwenkqubo yonyulo.
Iya kuyalela uMongameli weBhunga elinoLawulo oluPhezulu kunye noNobhala Jikelele wombutho ukuba babize amalungu eBhunga eliLawulayo ali-116 kunye neNdibano yeZizwe eziManyeneyo engaqhelekanga ngoMeyi 2022 kwindawo kunye nomhla oza kuchazwa.
Ukuba uNobhala-Jikelele okhoyo ngoku akayi kuphinda aqinisekiswe kwiNdibano yeZizwe eziManyeneyo ezayo, unokufumana elinye ithuba lokungenela ukhuphiswano olutsha olufanelekileyo kwesi sikhundla.
Ngamanye amazwi, kuya kubakho unyulo olutsha nolunobulungisa apho abagqatswa abatsha baya kuvunyelwa ukuba bakhuphisane kwaye bakhankasele isithuba.
Abaninzi bathi, oku kwakungenjalo ngoJanuwari 2021, xa iBhunga eliLawulayo liphinda linyula uZurab Pololikashvili.
Abaninzi bakholelwa ukuba le inokuba yeyona ndlela iphambili yekamva le-UNWTO kunye noKhenketho lweHlabathi. Ikwayeyona ndlela ingcono yamalungu amatsha anokubakho, afana ne-United States kunye namazwe ali-10 asanda kuzibandakanya kwinyathelo lehlabathi elikhokelwa yiSaudi Arabia kunye neSpain ukuze abe ngamandla okuqhuba ingomso elitsha nelingcono kwiWorld Tourism Organisation.
Isenokumisela ilifa elilungileyo kuNobhala Jikelele wangoku we-UNWTO.
Abaphathiswa be-UNWTO (Abathunywa) abaceba ukuya kwiNdibano Jikelele eMadrid NgoNovemba 28 - Disemba 3 ingenza imbali yezokhenketho zehlabathi.
Ukungayi kwiNdibano yeZizwe eziManyeneyo kunokuthetha ithuba elilahlekileyo lelizwe elinjalo elilahlekileyo kwesi siganeko sibalulekileyo.
Ngubani oza kulahleka kwiNdibano yeZizwe eziManyeneyo eTurboNews Iintatheli. NgoFebruwari 2018, eTurboNews ngokuzingca waxela ukuqeshwa kukaMarcelo Risi njengeGosa leMedia eliPhezulu le-UNWTO.
UMarcelo uxelele eTurboNews ngoFebruwari 2018 xa ebuzwa ukuba kutheni iimpendulo ezivela kwi-UNWTO azisekho rhoqo kwaye zinzima, impendulo yathi: "Kukho umgaqo omtsha wenkqubo kunye nokuvunywa."
Ngoku uMarcelo Risi ofanayo wayalelwa ukuba afakwe kuluhlu lwabamnyama eTurboNews ukusuka kwi-UNWTO yangoku, ukunyanzelisa eTurboNews ukwenza amanye amalungiselelo okujongana ngempumelelo nale Ndibano yeZizwe eziManyeneyo.